I-HGH yokudayiswa e-US - Thenga ihomoni yomuntu e-USA ngokusemthethweni
Ukuxhaswa kwe-24 / 7 + 1 217 759 3455 (shayela kuphela) WhatsAngxoxo + 66 94 635 76 37
I-HGH Pharmacy eBangkok inikeza ukuthumela mahhala kuya Izizwe ezihlangene zaseMelika we-hormone yokukhula komuntu. Ukusekela iziguli zethu California, Washington, I-New York, Florida, E-New Jersey nezinye izifunda zaseMelika. Imikhiqizo ye-HGH evela kwenkampani yezokwelapha i-Pfizer. BuyHGHThailand.com yi-distributor esemthethweni yezimpahla ze-HGH eThailand. Yonke yethu imikhiqizo ube nezitifiketi zekhwalithi, imithi yesiguli kanye namalayisense.
Ukuthunyelwa nokukhishwa kwemikhiqizo ye-HGH kumthengisi we-HGH wezomthetho e-US
Ikhemisi yethu ineminyaka engaphezu kwe-5 yokuhlangenwe nakho ukuthumela i-hormone yokukhula e-United States of America, ikakhulukazi ukuhamba kwe-hormone yokukhula ngamasiko. Ukulethwa kwenziwa yi-delivery delivery express Ukukhishwa kwe-UPS kwenziwa nge-UPS yokuhlinzeka ngenkonzo ephaketheni ekhethekile kusuka ekhemisi yethu
Ukuxhaswa kwe-24 / 7 kumakhasimende aseMelika (ukuguqulwa emareli)
Izindlela zokukhokha ezivikelekile zamakhasimende avela e-USA